Namaly ny fanaratsiana mihoa-pampana naelin’ny Depiote Tim, voafidy tany Ambatondrazaka ny avy amin’ny Fikambanana manohana ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina, na ny « Pro ANR », omaly. 28 octobre 2020
Tsara ny manamarika fa na any amin’ny Faritra na eto an-drenivohitra dia samy misy fotodrafitrasa napetraka avokoa. Ho an’Ambatondrazaka manokana, efa maro amin’ireo nampanantenain’ny Filoha sy nanaovany velirano no vita raha tsy hilaza afa-tsy ny kianja manara-penitra fotsiny, toho-drano hanondraka velaran-tany maro, ny lalana Feramanga Avaratra, ny tetezana ao Manaingazipo izay efa novaina ho tetezana “Fihariana” amin’izao fotoana. Misy fotodrafitrasa hafa efa vita sy an-dalam-pamaranana koa any amin’ny Faritra hafa toy ny fanamboaran-dalana, fananganana sekoly, hopitaly, fametrahana birao vaovaon’ny mpitandro filaminana sy ireo maro hafa. Mbola anaty veliranon’ny Filoham-pirenena koa ny fanamboarana ny lalana rehetra simba sy ny lalana tsy nisy niraharaha hatramin’izay. “Mbola mitohy ny asa rehetra fa tsy mbola mifarana eo akory. Mila mahay mijery sy mahay mankasitraka ireo be monomonona ireo. Tsy nijanona tamin’ny antoko nahalany azy ny Filoha, Andry Rajoelina, fa tena niasa ho an’ny Malagasy rehetra. Ilaina ny fanakianana fa ny fanakianana miendrika fankahalana no tsy mampandroso ity Firenena ity”, hoy hatrany ny filohan’ny “Pro ANR”
Vary gasy no nozaraina tao Ambatondrazaka
Tovolahy 18 taona nanolana an-jandriny vavy 06 taona voasambotra ANATIHAZO-ISOTRY (368) 25 janvier 2021 Ho azo tanterahina eto Madagasikara ny fandidiana famindrana voa FIANGONANA SY NY FANJAKANA (100) 25 janvier 2021 Mpanendaka miisa 06 sy mpifoka rongony roa saron’ny Polisy ASAN-JIOLAHY ETO AN-DRENIVOHITRA (96) 25 janvier 2021 Niakatra 442 ny marary vaovao, 06 ny namoy ny ainy FIVOARAN’NY COVID-19 (91) 25 janvier 2021 Mikatsaka ny fampidinana ny vidin-jiro sy rano eto Madagasikara FILOHA ANDRY RAJOELINA (74) 25 janvier 2021 Tonga ireo fitaovana vaventy fanaovan-dalana FANOMEZANA FAHALEOVAN-TENA NY FARITRA (56) 25 janvier 2021